Donald Trump oo si rasmi ah u noqday Madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka (Daawo Sawiradda) – STAR FM SOMALIA
Donald Trump oo si rasmi ah u noqday Madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka (Daawo Sawiradda)
Donald John Trump ayaa noqday madaxweynaha 45-aad ee dalka Mareykanka, wuxuuna dalka hoggaamin doonaa afarta sano ee soo socota.
Trump oo la doortay sideeddii November ayaa xilka si rasmi ah ugala wareegay Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama kadib markii lagu dhaariyay munaasabad ka dhacday aqalka Capitol Hill ee congress-ka Mareykanka.
Ku dhowaad hal milyan oo qof oo ka kala yimid dhammaan gobollada dalka Mareykanka ayaa isugu yimid magaalada caasimadda ah ee Washington DC ee si ay goob jog ugu noqdaan maalintan taariikhiga ah.
Markii Trump xilka lagu wareejiyay ayaa meelo ka mid ah dalka Mareykanka, waxaa ka dhacay Banaanbaxyo looga soo horjeeday Madaxweynaha cusub.
Obama ayaa la dar daarmay Madaxweynaha cusub ee Xafiiska sida tooska ah ula wareegay.
Ciidamada Yemen oo la wareegay gacan ku haynta Magaalada Mokha (SAWIRRO)
Qax ka biloewday Gambia iyo Ciidamo badan oo la geeyay xaduuda dalkaasi (Daawo Sawirada)